Waaxda Dalxiiska Jamaica ayaa wadata Soo -kabasho Dhaqaale oo Xoog leh
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Waaxda Dalxiiska Jamaica ayaa wadata Soo -kabasho Dhaqaale oo Xoog leh
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Toddobaadka Wacyigelinta Dalxiiska Jamaica
Hadallada laga soo jeediyay qayb ka mid ah Toddobaadka Wacyigelinta Dalxiiska ee Jamaica, Sebtember 26 illaa Oktoobar 2, Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett, wuxuu ku boorrinayaa dhammaan muwaadiniinta inay iska tallaalaan COVID-19 si loo badbaadiyo nolosha loona sii wado wadista soo kabashada dhaqaalaha jasiiradda.
Wasiirka Dalxiiska ayaa ku dhiirri -geliyay muwaadiniinta in la tallaalo iyadoo jasiiraddu u dabbaal -degayso Toddobaadka Wacyigelinta Dalxiiska.
Markaad eegto dib u soo kabashada guud ahaan, joogitaanka dalxiiska oo ah darawalka soo kabashadaas ayaa ka muuqatay dalka gudihiisa.
Caafimaadka iyo badbaadada dhammaan booqdayaasha iyo dadka deegaanka ayaa sii ahmiyadda koowaad siinaya Jamaica.
“In kasta oo aan u dabbaaldegno Toddobaadka Wacyi -gelinta Dalxiiska oo hoosta looga dhigay‘ Dalxiiska Loo -dhanyahay Kobaca, 'aan ku darno tallaalka isku -darka, maxaa yeelay taasi waa waxa ka dhigaya soo -kabashadeenna mid dhammaystiran laakiin ka sii muhimsan badbaadinta nolosha, "ayuu yiri Wasiir Bartlett. “Markaan eegno sida aan uga soo kabannay guud ahaan, joogitaanka dalxiiska oo ah darawalka soo kabashadaas ayaa aad u muuqatay. Waxaan soo saarnay sanadka illaa iyo hadda $ 1.2 bilyan oo dhaqaalaha ah waxaanan dalka keenay in ka badan hal milyan oo booqdayaal ah. ”
Wasiir Bartlett oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, “Waxaan wax uga qabannay masiibada si ku dayasho mudan duniduna waxay tixgalisay qaabkii hab -maamuusyada Jamaica ay si hufan oo wanaagsan u mareen ciyaartooyda warshadaha iyo guud ahaan qaranka. Waa inaan maamulnaa mas’uuliyaddeena si aanan cidna uga tegin. ”
Caafimaadka iyo badbaadada dhammaan booqdayaasha iyo dadka deegaanka ayaa sii ahmiyadda koowaad siinaya Jamaica. Horraantii bishaan, jasiiraddu waxay bilowday olole tallaal si loo fududeeyo maamulka tallaallada jasiiradda oo dhan iyadoo tallaallo iskood ah oo isdaba joog ah ay ka dillaaceen goobo istiraatiiji ah oo dalka oo dhan ah. Darawalkan ayaa ah fidinta barnaamijka JAMAICA CARES ee aasaaska u ah, jawaab qaran oo dhan COVID-19 oo ay kujirto Jidadka Adkeysiga ee jasiiradda iyo qawaaniin caafimaad iyo badbaado oo dhammaystiran.
Jidadka adkeysiga ee Jamaica, oo daboolaya in ka badan 85 boqolkiiba wax soo saarka dalxiiska jasiiradda oo ay ku jiraan wax ka yar boqolkiiba hal dadweynaha, ayaa diiwaangeliyay heerka caabuqa oo ka yar boqolkiiba hal sannadkii la soo dhaafay. Tani waxay si cad u muujineysaa guusha barnaamijka, oo ah kan kaliya ee noociisa ah ee Kariibiyaanka. Waxay siisaa jawi ammaan ah martida si ay ugu raaxaystaan ​​badeecada dalxiiska iyadoo meesha laga saarayo xiriir toos ah oo lala yeesho inta badan dadka deegaanka.
Jamaica waxay weli u furan tahay safarka waxayna sii wadaa inay soo dhoweyso booqdayaasha si nabad ah. Waa borotokoollada caafimaadka iyo badbaadada ayaa ka mid ahaa kuwii ugu horreeyey ee helay Golaha Socdaalka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) Aqoonsiga Socdaallada Nabdoon ee u oggolaaday in meeshu u socoto si ammaan ah dib loogu furo socdaalka bisha Juun 2020. Jasiiraddu waxay sidoo kale dhowaan ku dhawaaqday duulimaad dheeri ah oo laga soo qaaday suuqyada ilaha muhiimka ah iyo sagaashan. boqolkiiba maalgashiyada qorshaysan ee dalxiiska ee harsan
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Jamaica, fadlan tag booqojamaica.com.